Esi gbanye igodo WiFi na gam akporo: ngwa iji wepụ WiFi | Gam akporosis
Decrypt WiFi igodo na gam akporo
Paul Aparicio | | Noticias, Gam akporo Ndị aghụghọ
Onye na-agaghị achọ ịmụ esi decrypt WiFi igodo? Nke a bụ ihe na-emetụtakwa na njikọ Internetntanetị. Ọ dịwo ogologo oge kemgbe anyị nwere ike ịnụ ụtọ njikọ na-enweghị mkpa iji eriri, nke a maara dị ka Wifi. Uru dị na iji njikọ Wi-Fi dị ọtụtụ, dị ka ịghara itinye mgbakwunye, inwe ike ịgagharị n'ụlọ anyị kpamkpam site na iji ngwaọrụ ejikọrọ yana ọbụnakwa jikọtara ya na mgbidi n'etiti ngwa anyị na rawụta. O nwekwara uru ọzọ, mana maka ndị na-achọghị ịkwụ ụgwọ maka njikọ ahụ: ha nwere ike igodo WiFi igodo site n'aka ndị agbata obi anyị iji jikọọ na ịntanetị na-enweghị akwụ ụgwọ.
Ke ibuotikọ emi anyị ga-ekwu banyere ihe niile metụtara decrypting WiFi igodo na-eji ngwaọrụ android. Mana tupu ịmalite m ga-achọ ịkpọ oku na "Fair Play" na ịdị ọcha: ọ bụrụ na anyị akọwapụta okwuntughe onye agbata obi gị na-akwụ ụgwọ maka njikọ ya, ihe adịghị ka nhọrọ bụ ịmalite ibudata ọdịnaya dị arọ nke ga-ebelata ya njikọ. Ọ bụ otu ihe inwe ike ịkpọtụrụ Facebook, lee anya na ibe weebụ ma ọ bụ zipu ozi-e na ihe ọzọ bụ ibudata DVD Ubuntu, dịka ọmụmaatụ. N'aka ozo, oburu na anyi zuo WiFi ha na onye agbata obi ha, ha agaghi achota ya ma jiri ya na 99.99%.
Ma ka ha ghara itinye usoro a na gị, ị nwere ike inwe mmasị mara onye ejikọrọ na netwọk gị WiFi. Ugbu a ee, ka anyị chọpụta otu decrypt WiFi na-eji ngwa gam akporo anyị.
1 Nwere ike ihichapụ igodo WiFi na gam akporo?
2 Ngwa iji kpochie igodo WiFi n'efu na gam akporo
2.1 Esi esi kpochapụ igodo WiFi WEP na bcmon
2.2 Etu esi ewepu igodo WPA WiFi na bcmon + Reaver
3 Etu ị ga-esi weghachite igodo WiFi na gam akporo
3.1 Rawụta Keygen
3.2 Ihe njikwa WiFi
3.3 WLANA nyocha
3.4 Na-agbake igodo ndị echekwara na ngwaọrụ anyị
4 Ọ bụ iwu iji ngwa iji gbue igodo WiFi?
Nwere ike ihichapụ igodo WiFi na gam akporo?
Ee, ị nwere ike ịchọpụta paswọọdụ WiFi. Karịsịa ma ọ bụrụ na netwọk ikuku anyị na-agbalị decrypt nwere WEP izo ya ezo. Ọ bụ ihe ezoro ezo nke anaghị ejikwa ya ọzọ, mana ọ ka nwere ike ịchọta netwọkụ na WEP nke ga-eme ka ọrụ anyị dị mfe karị. Anyị nwere ike ịnweta igodo WEP site n'ike siri ike na ọ ga - abụ naanị obere oge tupu anyị enweta ya.
Ugbu a ọ bụrụ na netwọkụ nwere WPA izo ya ezo, ihe gbagwojuru anya. Iberibe igodo WPA chọrọ ihe a maara dịka "okwukwe aka" na nke ahụ adịghị mfe. Ihe enwere ike ime ngwa ngwa bụ ịnweta igodo WPA nke agbanwebeghị. Usoro iwu a dị mfe: ọ bụrụ na “ụlọ ọrụ Morrotel” na-enye routers nke ika "Wifitel", igodo ga-abụ otu, ma ọ bụghị ihe niile routers ha ga-enwe otu. M na-ekwu na a ga-enwe ihe atụ 1.000 igodo nke routers "Wifitel" nke “Morrotel” ga-eji. Enwere ụfọdụ ngwa nwere igodo ndị a echekwara ma nwee ike ịme ụdị ike ọjọọ a site na iji akwụkwọ ọkọwa okwu ndị dịnụ. Ngwa ndị ọzọ nwere ike iru ọtụtụ ihe.
Ngwa iji kpochie igodo WiFi n'efu na gam akporo
Esi esi kpochapụ igodo WiFi WEP na bcmon
Nke kacha arụ ọrụ bụ ogbe. Enwere ike ibudata ya na HERE (download na gị onwe gị n'ihe ize ndụ) na ọ bụ a-akpali nnọọ mmasị ngwá ọrụ na nke anyị nwere ike decrypt WiFi igodo.
Lee, anyị na-agwa gị otu chọpụta WiFi paswọọdụ na ngwa a, mana ịmara na ọ bụghị ngwaọrụ niile dakọtara.
Anyị kwesịrị mgbọrọgwụ ngwaọrụ dakọtara nke nwere Broadcom bcm4329 ma ọ bụ bcm4330 Wifi chipset, dị ka Nexus 7, Samsung Galaxy S, Galaxy Y, Nexus One, Desire HD, Micromax A67. Zọ kachasị mma iji mee nke a ga-abụ ịwụnye Cyanogen ROM na ya.
Anyị na-ebudata, wụnye ma na-agba bcmon. O yikarịrị ka ị ga-ekwe ka ntinye nke ngwa ndị a na-edeghị ede site na ntọala ngwaọrụ.
Anyị gbara na «Gbaa bcmon ọnụ«, Nke ga-emeghe ihe yiri Linux Terminal. Anyị dere "airodump-ng»(Na-enweghị nkwuputa akara) ma anyị emetụ Intro aka. Nke a ga-ebu ngwa dị mkpa.
Mgbe ahụ, anyị na-ede «airodump-ng wlan0»Ma pịa Tinye ọzọ.
Anyị na-amata netwọk anyị chọrọ iwepụ na ndepụta nke ebe nnweta anyị ga-ahụ. Anyị ga-ahọrọ otu na nzuzo WEP.
Anyị na-ede adreesị MAC nke netwọk ahụ anyị họọrọ na nzọụkwụ 5. Anyị na-edekwa ọwa netwọk dị na ya.
Anyị na-amalite i scanomi ọwa iji nakọta ozi, ihe nwere ike iwe ọtụtụ awa. Anyị ga-eme ya site na ịde (na-enweghị nkwuputa) «airodump-ng-c ọwa # –Bsid Adreesị MAC -w mmepụta egwuregwu0«, Ebe akara ga-abụ ozi nke netwọkụ ahọpụtara na nzọụkwụ 5. Anyị pịa tinye na Airodump ga-amalite nyocha. Ọ kachasị mma ịhapụ ngwaọrụ ahụ ka ọ rụọ ọrụ ya, yabụ anyị ga-ahapụ ya naanị ya jikọọ na ntinye ikike. Ọ dịkarịa ala, a ga-anakọta nchịkọta 20.000, ọ bụ ezie na ka anyị na-anakọta, ka o yikarịrị ka anyị ga-agbaji igodo ahụ.
Ozugbo anyị nwere ngwungwu ndị dị mkpa, anyị nwere ike ịmalite ibelata isi site na iji iwu «aircrack -ng mmepụta * .cap»(Mgbe na-enweghị ruturu) na ịpị tinye.
Ọ bụrụ na anyị ahụ ozi "Achọta!", Anyị ga-enweworị ya. Igodo hex ga-apụta. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị ahụ 12: 34: 56: 78: 90, igodo ahụ ga-abụ 1234567890.
Etu esi ewepu igodo WPA WiFi na bcmon + Reaver
Anyị kwesịrị mgbọrọgwụ ngwaọrụ dakọtara nke nwere Broadcom bcm4329 ma ọ bụ bcm 4330 Wifi chipset, dị ka Nexus 7, Samsung Galaxy S, Galaxy Y, Nexus One, Desire HD, Micromax A67. Zọ kachasị mma iji mee nke a ga-abụ ịwụnye Cyanogen ROM na ya.
Anyị ebudatara Reaver .apk. Ọ dị na EGO.
Anyị na-emeghe Reaver ma gosipụta na anyị agaghị eji ya iwu na-akwadoghị. Reaver ga - enyocha ihe nnweta dị.
Anyị na-egwu na netwọkụ anyị chọrọ ịgbawa.
Ọ bụrụ na ọ jụrụ anyị ka anyị lelee ma ọ bụrụ na ọ bụ na nyochaa mode, ka mepee bcmon ọzọ wee lelee ya.
Anyị na-elele na na Reaver ntọala igbe «Akpaka elu ntọala".
Anyị malitere ọgụ site na ịpị aka na «Malite ọgụ»Na menu na ala nke Reaver. Nyochaa ga-emeghe ma anyị nwere ike ịhụ nsonaazụ ya na ihuenyo ọhụrụ.
Etu ị ga-esi weghachite igodo WiFi na gam akporo
Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ weghachite onwe anyi igodo WiFi na gam akporo, anyị nwere ike ime ya n'ụzọ dị iche iche.
Ikekwe ngwa kachasị ama Rawụta Keygen. Dị ka aha ya na-egosi, ngwa a bụ "igodo jenerato maka ndị na - eme njem". Ọ bụ eziokwu na ọ naghị egbutu igodo, mana ọ nwere ike inye anyị igodo ndabara maka ndị na - esote ụzọ:
Njikọ (naanị ụfọdụ ụdị)
VerizonFiOS (naanị ụfọdụ ụdị)
FASTWEB Pirelli na Telsey
Huawei (ụfọdụ Infinitum)
Jazztel_XXX (Comtrend na Zyxel)
Wlan_XX (ụfọdụ ụdị)
Wifi XXXXXX (aka wlan4xx)
igbe v1 na v2 (TECOM)
Ọrụ ya dị mfe dị ka ilele netwọkụ ndị dị, na-emetụ aka na Nkwado ma ọ bụ Eleghị anya Akwadoghị ma nwalee igodo ọ na-enye anyị. I nwere ihe omuma ndi ozo EGO.
Download rawụta Keygen na Google Play
Ihe njikwa WiFi
Yiri nnọọ ka rawụta Keygen bụ Ihe njikwa WiFi. O nwekwara akwụkwọ ọkọwa okwu nke ga-enyere anyị aka ijikọ routers Ha agbanwebeghị ndabara paswọọdụ, mana ọ nwere atụmatụ ka mma karịa ngwa ochie. Na mgbakwunye, ọ na-enyekwa ụdị maapụ nke anyị ga-ahụ ebe netwọkụ dị, nke ga-enye anyị ohere ijikọ na netwọkụ nke na-enye anyị njikọ kacha mma.
Budata WiFi Manager na Google Play
Ngwa ọzọ dị ka nke abụọ gara aga bụ WLANA nyocha, nke ga - enwe ike igodo igodo ahụ ma ọ bụrụhaala na ha nọ na WEP. Ọ bụrụ na netwọkụ anyị chọrọ decrypt bụ WPA ọ gaghị enwe ike. Ojiji nke ngwa a dị mfe: anyị na-emetụ na otu n'ime netwọk ndị ọ na-egosi anyị ma ọ bụrụ na ọ nwere ike gbakọọ ya, ọ ga. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-ahụ na ọ na-ekwu "Enweghị ike ịgbakọ".
Na-agbake igodo ndị echekwara na ngwaọrụ anyị
Anyị nwekwara ike ịhụ igodo echekwara na ngwaọrụ anyị, ihe anyi nwere ike nweta na ngwa dika
Ihe ngosi WiFi.
WiFi Key Recovery (mkpa mgbọrọgwụ).
Wifi Key Iweghachite [mgbọrọgwụ].
Wifi Paswọdu Iweghachite [mgbọrọgwụ].
Ọ bụ iwu iji ngwa iji gbue igodo WiFi?
Noel edemede 286 nke organic osisi 15/2003 kwuru na
"A ga-ata ya ahụhụ site na mkpọrọ nke afọ isii ruo afọ abụọ na mma nke ọnwa isii ruo iri abụọ na anọ nye onye ọ bụla, na-enweghị nkwenye nke ndị na-eweta ọrụ yana maka ebumnuche azụmahịa, na-eme ka mmadụ nwee nghọta iji nweta ọrụ mgbasa ozi redio ma ọ bụ telivishọn, mmekorita nke enyere site na elektrọnik, ma obu nye ha ohere onodu, elere anya dika oru nke onwe, site na: imeputa, ibubata, nkesa, weputara elektrọnik, ire ere, mgbazinye ma obu inweta akụrụngwa ma obu komputa, anaghi enye ikike na ndi ozo European Union […]”. N'okwu nke 4 nke otu isiokwu ahụ, ọ kọwara "Onye ọ bụla nke na-eji akụrụngwa ma ọ bụ mmemme na-enye ohere ịnweta ọrụ ịnweta ọnọdụ ma ọ bụ akụrụngwa nkwukọrịta, a ga-enye ya ntaramahụhụ enyere maka edemede 255 […]".
Na nkenke, ọ bụghị iwu na, n’enweghị ihe ijuanya, ndị ntaramahụhụ ga-adị ukwuu karịa maka ndị na-enye ọrụ ịgbawa okwuntughe maka uru, onye nwere ike ịta ya ahụhụ ruo afọ abụọ n'ụlọ mkpọrọ. Nke a pụtara na ọ gaghị abata ma ọ bụrụ na ọ kwụọ ụgwọ, ebe opekata mpe ịbanye mba n'enweghị nsogbu bụ afọ abụọ na otu ụbọchị, mana ọ ga-ahụ ọkpụkpụ ya n'ụlọ mkpọrọ ma ọ bụrụ na ọ nwere ndekọ mpụ.
N'ikwu ihe niile dị n'elu, ọ kachasị mma iji Wi-Fi nke anyị ma chefuo nsogbu ndị nwere ike ịmalite site n'ịmụta otu esi emebi igodo Wi-Fi. Ọ bụ ezie na ọ bụkwa eziokwu na ndị ọrụ ndị ọzọ nwere ike izuru njikọ anyị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ nke ahụ anyị paswọọdụ-mma, ọ kacha mma ịme ihe ndị a:
Gbanwee okwuntughe ndabara na ozo.
Ọ bụrụ na i jiri ezoro ezo WEP, anyị gbanwee WPA. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, gaa WPA2.
Zoo netwọkụ anyị. Na tiori, nke a ga-egbochi mmemme ịhụ netwọkụ, ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịhụ ya, ha agaghị enwe ike ibido ọgụ ọ bụla. Iji jikọọ ngwaọrụ nke anyị, anyị ga-etinyerịrị aha netwọkụ anyị (ya na otu isi obodo na obere mkpụrụedemede), ụdị netwọkụ na okwuntughe anyị.
You jisiri ike weghachite igodo WiFi gị ma ọ bụ mụta iji esi decrypt WiFi igodo amaghi?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Ndị aghụghọ » Decrypt WiFi igodo na gam akporo
blas rye dijo
ụtụtụ ọma ya nwere ike arụnyere na desktọọpụ ọ bụla nke na-eji windo xp, 7,8 wdg.
Zaghachi blas rye
Ekele: ndị enyi m nwere LG vs980 verizon na m ga-achọ ịma mgbe mmelite gam akporo 5 lollipop ga-adị
Zaghachi ka eddy moya
chago castaneda dijo
Ọ ga-amasị m ịkekọrịta njikọ Wi-Fi nke sony expeira na amaghị m ngwa nke ibudata
Zaghachi chago castañeda
Taa, m ga-anwale na njikwa wifi adịchaghị m ga-agwa gị maka ya !! Daalụ
Zaghachi laura figueroa
Olee otu n’ime ha sirila rụọ ọrụ?
Ekwentị (ekwentị) dijo
Ọ bụ eziokwu na ha arụtụbeghị ọrụ m na-ahọrọ mbanye anataghị ikike m pc….
Zaghachi Telefoneros (@telefoneros)
Nọmba ekwentị Nọmba, kedu ka esi esi mbanye na pc gị, gwa m na m chọrọ, mana enweghị ngwa na-arụ ọrụ m
Zaghachi karen valverde
AJERGH S IWU ,,, SHIT
Onwe ya, ndị kachasị mma m nwara bụ WifiPassword na Pulwifi, ị hụrụ ezigbo ngwa maka gam akporo ngwaọrụ na-arụ ọrụ zuru oke.
Ọ dị mma maka nyocha ma ọ bụ maka oge ndị ahụ ịchọrọ netwọ Wi-Fi ... 🙂
Zaghachi adan zapata
Miardas ndị ahụ adịghị arụ ọrụ ka mma karịa ngwa REVELAWIFI na ọ bụ ezie na ọ naghị asọpụta ihe niile mana ọ na - arụ ọrụ nke ọma mgbe ọ na - achọpụta netwọkụ na - adịghị ike
Iji jiri ngwa m ga-ejikọrịrị netwọk dịka ngwa ndị ọzọ ???
Zaghachi Andrezz Guerrero Lds
Enweghị m ike iwepụ netwọk ọ bụla na ngwa ndị ahụ ..
ọ bụghị eziokwu sere ọma 😀
nke vdv dijo
Peeji nke ị kwadoro n'ejighị ihe ọ bụ. Web jọgburu onwe ya. Adighi eme nkwa okwu gi.
Achọrọ m ịma otú m ga-esi nweta ozi nzuzo nke mafia ppgate opus dei ekele
Ndị mmadụ, a na m agwa gị na maka mmemme ndị a, mmemme ọ bụla iji nweta Wi-Fi site na ekwentị, ekwesịrị iji "chipped" ekwentị yana egwuregwu iji gụọ egwuregwu aghụghọ mana o doro anya na nke ahụ pụtara otu puku ihe na ọbụlagodi ihe ize ndụ nke ibibi ekwentị. ọ bụghị kwesịrị ya
Ndewo, enwere m olileanya na nke a bụ ihe m na-achọ
Ndewo, a bụ m Laura Barrueta Flore, ee, kedụ ụdị nna bụ enyi m Maite?
Facebook…. Lizeth Esmeralda Hernandez gg gbakwunyere XD ..
Enwere ngwa dị ezigbo mma iji nweta paswọọdụ WIFI site na rawụta nke gị mgbe ịtọgharịrị ekwentị ma ị chọghị ịga rawụta iji lee ya anya, ọ bụrụhaala na ị nwere usoro WPS. Na-eje ozi n'ihi na android 4.0 na-eso nsụgharị ajụjụ ọ bụla mateo.cristo91@gmail.com